Arindrao ny Instagramo miaraka amin'ny ColorStory | Famoronana an-tserasera
Betsaka ny rindranasa fanovana sary any, fa efa nahita ColorStory nandritra ny fotoana kelikely aho, ary tena tiako izany.
Raha ny marina dia tsy mampiasa an'ity rindranasa ity aho hanovana sary, ampiasako indrindra handaminana ny Instagram ary tena ilaina izany.
Inona no atolotra azy?
Fampiharana maimaim-poana izay manome antsika fahafaha-manova maro:
Una karazana sivana isan-karazany
Ny vokatry ny jiro, loko, kintana sns.
Fahazavana, mifanohitra, manazava, fametrahana loko, Etc.
Na dia marina aza fa manana fivarotana ihany koa izy io ahafahantsika mividy kojakoja isan-karazany.
Etsy ambany no ahitanao sary misy sary nefa tsy namerina namerina ary namerina namerina.
Fa ny tena tiako indrindra amin'ity rindranasa ity ary ny tena ampiasako azy dia ho an'ny alamino ny Instagram. Tena narary andoha ahy ny nieritreritra ireo lahatsoratra sy ny fomba fahitana ny kaontiko.
Mba hahafahako mahita ny valiny farany amin'ny kaontiko dia nandamina ny Instagram-ko ho kianja amin'ny Illustrator aho, nanondrana azy ary isan'andro nanandrana namoaka aho, na izany aza imbetsaka no hadinoko.
Saingy rehefa hitako ny ColorStory dia tapitra io olana io. Ny mamela ahy hampihatra ny Instagram amiko amin'ny fomba tena tsotra ity fampiharana ity dia ho tadidiko hoe rahoviana no tsy maintsy atao.
Voalohany dia mila misoratra anarana ianao ny kaontinao Instagram
Mampiseho aminao ny fanontana farany nataonao ny fampiharana, zavatra tena ilaina tokoa satria manomboka amin'ny tena fototra ianao.
Afaka manomboka isika mampakatra ny sarinay ary manafà azy ireo araka ny itiavantsika azy bebe kokoa, ary manitsy azy ireo mihitsy aza.
Lafiny iray hafa manasongadina izany afaka manoratra ny lahatsoratry ny famoahana tsirairay izahay
Manomana fotoana sy daty hamoahana izahay
Irery izao andraso izy hampatsiahivina antsika ny fotoana handefasana
Tena eIzy io dia rindranasa izay mora ampiasaina ary hanamora ny asanao sy hamonjy fotoana anao. Raha mampiasa azy ianao dia lazao amiko izay hevitrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Arindrao ny Instagram amin'ny ColorStory
Blender kinova 2.80 ankehitriny misy amin'ny fanavaozana interface tsara sy maro hafa